अस्पतालबाट शिशु चोरेर दिल्ली लैजाने तयारी गर्दै गरेका दुई महिला पक्राउ - Nepal Insider
ओली सरकारविरुद्ध विप्लवले गरे बन्द घोषणा
दुलही जन्ती लिएर दुलाहा को घरमा बिवाह गर्न पुगेपछी
एक्कासी बे’होस भएर मलेसियामा एक नेपालीको मृ’त्यु
को बन्ला त्यो पहिलो लोकस्टार ?
”गलबन्दी” पछिको अर्को “नयाँ गलबन्दी”सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै बन्यो भाईरल(भिडियो)
इन्द्रेणीमा फेरी चल्यो रुवाबासी (भिडियो )
श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस्
पहिला यस्ती थिइन् रक्षा श्रेष्ठ हर्नुहोस् पहिला र अहिलेका तस्बिरहरू…(फोटो फिचर)
मोटरसाईकल दुर्घटनामा प्रहरी जवानको निधन
Home/समाचार/अस्पतालबाट शिशु चोरेर दिल्ली लैजाने तयारी गर्दै गरेका दुई महिला पक्राउ
अस्पतालबाट शिशु चोरेर दिल्ली लैजाने तयारी गर्दै गरेका दुई महिला पक्राउ
विराटनगर : सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट बुधबार राति एक शिशु चोरी भएको छ। प्रतिष्ठानबाट १३ दिने शिशु चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जना महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ।
पक्राउ पर्नेमा धरान १५ की लिला बिक र उनकी भाउजु मिना लिम्बू बिक रहेका छन्। शिशुलाई धरान–१५ बगरकोटमा फेला पारिएको थियो। उनीहरूविरुद्ध बच्चा चोरी तथा अपहरणको जाहेरी दर्ता भएको छ। बच्चा जन्मिएलगत्तै वार्डतिर नै बसेर सहयोग गरेजस्तो गरेर उनीहरूले बच्चा चोरी गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। लिला विकका श्रीमान् भारतको दिल्ली बस्दै आएको बताइएको छ। नवजात शिशुलाई उनीहरूले भारतको दिल्ली लैजाने तयारी गरेका थिए। लीलाका सन्तान नभएका कारण आफूले छोरा बनाई पाल्ने उद्देश्यले नवजात शिशुको अपहरणशैलीमा चोरी गरेर लगेको प्रहरीको प्रराम्भिक चरणको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाइ छ।
अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेकी लिलाले आफू पाल्नका लागि लगेको बयान क्रममा प्रहरीलाई बताएको इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेले जानकारी दिए। चोरी भएको सुनसरीको भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका १ का जितनारायण मेहता र बबिता मेहताको छोरा हो। बबिताले गत असार १३ गते छोराको जन्म दिएकी थिइन्। आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनीहरूको वार्डमा नै राखेर उपचार भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। लिला विक वार्डमा कुरुवाजस्तो भएर बस्दै आएकी थिइन्। राति वार्डका सबै निदाएको बेला बच्चा चोरी भएको थियो।
एसइई बी ग्रेड ल्याएकी करिश्मा मानन्धर भन्छिन -“प्लस टु सरकारी कलेजमा पढ्छु” !
राष्ट्रपति भवन अगाडीको सडकमा यस्तो अवस्थामा भेटिइन पूर्व मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा
संसारकै कान्छो बन्दी जसलाई १४ वर्षमै जेलमा थुनियो, १८ वर्षमा फाँसी सुनाइयो !
९ जनाको मृत्यु हुने गरि भएको हत्यामा भागेर बचेकी १२ बर्षिय सिता यसो भन्छिन(भिडियो सहित)
भाइ ‘जिग्रीले अन्तर्वार्ता लिँदा दाइ ‘धुर्मुस’किन भए भावुक ? के कुराले यस्तो भय (भिडियो सहित)